Emnambithi/Ladysmith Municipality kanye ne Hardcore Entertainment
Umasipala wase Mnambithi ngokuhlanganyela ne Hardcore Entertainment bazobe benomcimbi wokuvuselela kabusha uhlelo okuthiwa phecelezi I "Concert in the Park". Loluhlelo kuhloswe ngalo ukuthuthukisa amakhono kwezomculo ubuciko emiphakathini eyakhele uMnambithi namaphethelo.
Lo mcimbi uzobanjelwa njengokulandelayo:
Time: 10h00 � 16h00
Venue: Siege Museum (Next To Town Hall)
I Concert in the Park uhlelo oluzokwenzeka njalo ngempelasonto yokugcina enyangeni (Lwesihlanu no Mgqibelo). Besekuthi njalo emva kwezinyanga ezintathu kube nomcimbi omkhulu okuzomenywa onke amaciko ase Mnambithi namaphethelo.
Ngakhoke umphakathi uyamenywa ukuba ube ingxenye yalo mcimbi. Esinye isimemezelo kumenywa wonke amaciko emikhakha ehlukene ukuba azobhalisa amagama awo ohlwini phecelezi "database" emnyangweni wezamaciko (Siege Museum eduze nase Town Hall).
Mayelana nemibuzo ningathintana no : Jongukuthula Shabalala 073 6188163/ 036 637 2992 E mail: jshabalala@ladysmth.co.za or jsjshabalala@gmail.com
Click here to view the Concert in the Park Poster (PDF)